Kabsado tirtiray iPad Notes, Photos, Videos, Xiriirada, Calendar, iwm
Notes tirtiray, Calendar, Photos, Xiriirada, iyo Vidoes ka iPad (macruufka 9 mid)
Si loo xaqiijiyo guusha soo kabsaday files tirtiray ka iPad (macruufka 9), fadlan joojiya adiga oo isticmaaleya isticmaale iPad hadda iyo ka heli computer u dhow, diyaarinaya iPad tirtiray kabashada files. Haddii aad sii adiga oo isticmaaleya isticmaale iPad, fursadda guusha inuu ka soo kabsado iPad tirtiray files yarba wuxuu noqon doonaa.
Waxaan lahaa note ah ee hadda jira in aan sixiddiisa shalay iyo bartey waxaan ku dhuftay isku dhafan oo muhiim ah in la tirtiro qoraalka oo dhan ee Note ah (wax badan). Waxaan tan iyo markii laga helay muhiim ah tirtireyso on keyboard ah, laakiin taasi ma soo celin lahaa qoraalka in la tirtiray. Waxaan isku dayay wax kasta oo ay u laakiin nasiib ma soo kabsado. Ma Notes synced in Lugood? Haddii ay sidaas tahay, xagee baan ka heli? Kasta oo fikrado ku saabsan sida ay u soo kaban aan Fiiro gaar ah? Thanks!
Waxaa dhacaya oo dhan wakhtigii marka aad isku daydo inaad wax ka bedel ama cusboonaysiin qoraalada, jadwalka, xiriirada, sawiro, ama videos on your iPad, aad ku sawirnaa fure u tirtirto unconsiously. Ma kartaan inaad ka heli doontaa ah Cancel heli karaa fure on your iPad in aynu aad dib ugu heli lahayn wixii aad tirtiray. Taas darteed, dad had iyo jeer u caban ama Faraha ay tallaabo doqon. Dhab ahaantii, files aad tirtirto ka iPad tegin. Ay weli ka jiraan meel aad iPad (macruufka 9), laakiin la arki karin. Oo ah iPad Recovery Software qalab xirfadle, waxaad iyaga soo kaban karto, si aad u computer dambe mar kale dib u gudbaayo iPad. Haddii aanad garanayn software kasta inuu ka soo kabsado tirto faylasha on iPad, isku day DSHISKA kabashada ugu horreeya adduunka ee - Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) .
iPad Software Recovery - Ladnaansho tirtiray Faylal ay ka iPad
3 hababka soo kabashada sameeyo suurto gal inuu ka soo kabsado files aan file ah oo gurmad ah;
Si buuxda u taageersan xiriirada, sawiro, jadwalka, qoraalo, Bookmarks, iyo soo-kabsashada videos;
Xulo ku eegaan ceshan xog kasta oo aad rabto in aad iPad;
Talooyin: inkasta oo software tani waa shareware, in aad marka hore kala soo bixi kartaa version xorta ah maxkamad in baarista iPad u files tirtiray. Haddii ay ka heli karaan faylasha aad tirtiray, waxay ka dhigan tahay in aad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado oo dhan ka helay files. Hoos waxaa ku qoran 3 siyaabood oo aad isku dayi kartaa software this inuu ka soo kabsado files tirtiray iPad.
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPad inuu ka soo kabsado xog ku saabsan waxa Qeybta 2: Xulo soo kabsado tirtiray iPad ka Lugood gurmad Qeybta 3: ceshano xogta iPad tirtiray kaga imaanayo iCloud
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPad inuu ka soo kabsado xogta ku yaal
Tallaabada 1 Connect aad iPad oo iskaan
First of dhan, ordo barnaamijka aad Mac. Markaas xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka. Marka aad iPad la aqoonsan yahay, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose. Riix Start badhanka si ay u bilaabaan u baar. Haddii aad isticmaasho iPad 1, waxa kale oo aad ka badalan karaa in an Mode Advanced si aad u hesho baaritaan qoto dheer. Waxa aad awood u tahay in la helo xog dheeraad ah oo ku lumay it on.
Marka scan la dhammeeyo, waxaad eegi kartaa dhammaan xogta laga helay waxaa ku qaybood. Iyaga Guji mid ka mid ah oo ku eegaan waxa ku jira. Sax shayga aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.
Qeybta 2: Xulo soo kabsado tirtiray iPad kaga imaanayo Lugood
Haddii aad badiyay aad iPad (macruufka 9), ama waxa kaliya ma dhow dahay, waxaad dooran kartaa inuu ka soo kabsado aad iPad kaga imaanayo Lugood marka aad u synced la Lugood dhawaan. Waxa kale oo aad qaadataa labada tallaabo, oo aad ku eegaan karo content oo dhan iyo eegista soo kabto wixii aad rabto in aad ka.
Tallaabada 1 Dooro gurmad Lugood oo Macdan
Tag hab kabashada ee ka soo kabsado Lugood ee kaabta File ka dib markii socda barnaamijka. Markaas barnaamijka si toos ah ka heli doontaa dhammaan Lugood gurmad file on your computer oo iyaga soo bandhigaysaa in aad sida liiska. Mid ka mid ah si aad u iPad Dooro iyo riix Start Scan badhanka si ay u soo saaro.
Tallaabada 2 xogta iPad Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado gurmad Lugood
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan dhammaan xogta laga helay gurmad Lugood ah, oo ay ka mid jira oo la tirtiro mid. Just fiiri mid mid iyo sax shayga aad rabto. Markaasuu iyaga ku badbaadin on your computer ka mid ah.
Qeybta 3: ceshano xogta iPad tirtiray kaga imaanayo iCloud
Ka sokow soo celinta dhan iCloud gurmad file ah, waxaa sidoo kale jira hab kale in la soo celiyo aad gurmad iCloud hadda: Falanqeynta hore, eegista dooran oo ka soo kabsado. Taasi waxa Wondershare Dr.Fone ee macruufka kuu oggolaanayaa in aad samayn. Aan lagu hubiyo sida tallaabooyinka tagaan.
Dooro habka soo kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado iCloud kaabta File marka aad bilaabay barnaamijka. Markaas waxaad ka gali kartaa ID Apple adigoo galaya xisaabta iyo password. Ka dib markii in, barnaamijka wuxuu idin ​​tusin doonaa dhammaan faylasha gurmad in aad xisaabta. Ka dooro si aad u iPad (macruufka 9) inaad kala soo baxdo iyo waxa laga baarayo.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan iPad files kaga imaanayo iCloud
Skaanka aad qaadataa dhowr daqiiqo. Just naftaada u hesho koob bun ah. Marka la joojiyo, waxaad ka arki kartaa dhammaan xogta laga helay natiijada scan. Iyaga Hubi mid mid u fiirso shayga aad rabto in gurmad. Markaasuu iyaga ku badbaadin on your Mac ka mid ah.
> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPad Photos, Notes, Videos, Xiriirada & Calendar